Terra Delle Sidhe, Seggiano, Tuscany - I-Airbnb
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Luisa
U-Luisa Ungumbungazi ovelele
I-Terra delle Sidhe iyipulazi elincane elingokwemvelo eliseningizimu ye-Tuscany elibheke isigodi esihle esisemathafeni ase-Monte Amiata, phakathi kwamadolobha amadala ase-Castel del Piano ne-Seggiano.
Indlu eyakhiwe ngamatshe yohlobo lwe-butnut eneminyaka engu-250 isetshenziswa kuze kube yiminyaka engu-30 edlule, indlwana yeholide esiyinikezayo izungezwe ihlathi lamantongomane anemvelo nezihlahla zomnqumo ezingamakhulu eminyaka ubudala. Le ndlu ethokomele manje isilungiswe ngothando futhi ilula.
Le ndlu yamatshe enemiqadi yayo yasekuqaleni yamapulangwe yamantongomane aqala eminyakeni engaphezu kuka-250 ihlanganiswe ngokuvumelana kule sethingi emangalisayo. Inekhishi elithokomele negumbi lokugezela lesimanje elilula, ngokushesha uzozizwa usekhaya.
I-Terra delle Sidhe inikeza ithuba lokubungaza kuze kufike kubantu abahlanu emakamelweni amabili ahlukene ngokusetshenziswa kwekhishi nezixazululo eziqokiwe kanye nezindleko.
Uhlelwe endaweni yobuhle obungabonakali, ungazisa iphunga, imisindo, imibala kanye nokunambitheka kwemvelo kusuka ekulula okumnandi okukuvumela ukuba uxhumane nomqondo wangempela wemvelo namasiko akwazi ukuwanikeza labo abakhetha iholide eligcwele ukuzola nokuphumula.
Le ndawo inehlathi lemvelo eliyingqayizivele kanye nemikhiqizo ehlukahlukene evamile yamapulazi angokwemvelo.
Le ndlu isabalalisa ngaphezu kwama-acres amathathu ama-butnuts aseceleni kanye nezihlahla zomnqumo ezikhiqiza ama-Amiata amnandi ama-marroni kanye nezinhlobonhlobo ezinohlonze zezintombi zomnqumo ezihlukahlukene ze-DOP Olivastra Seggianese.
Izinhlobonhlobo ezicebile zezihlahla zezithelo, izitshalo zokwelapha, ingadi ye-biodynamic, inhlama yamantongomane, izinsipho zemvelo, itiye elimnandi kanye nemikhiqizo ehlukahlukene engokwemvelo ekhiqizwe epulazini lethu.
Ukusuka lapha ungahlola izindawo ezithandwayo emhlabeni, wenze imisebenzi eminingi futhi ujabulele ukuthula kwempilo yezwe lase-Tuscan kude nezixuku zezivakashi.
Iziphethu ezishisayo ezidume kakhulu ezifana ne-Saturnia, i-Petriolo, i-San Filippo ne-Bagno Vignoni ziqhele ngemizuzu engu-30-60 ukusuka endaweni yethu, ibanga elifanayo lamapaki amahle kakhulu emvelo anjenge-Alberese, amabhishi i-Cala Violina ne-Cala Martina, i-Monte Amiata ne-Monte Labbro.
I-Val D'Orcia edumile namadolobhana ayo amangalisayo asemandulo ingemuva nje kwekona lethu, ushayela isikhathi esingaphansi kwehora elilodwa ungathola lezo eziyinhloko futhi ujabulele ubuhle bazo namasiko ahlaba umxhwele namasiko ahlaba umxhwele.
Sizokunikeza uhlu lokusikisela lapho uzozwa khona ukudla kwendawo okuvamile, okubukwayo kanye nenani elihle lezenzakalo zomculo, izimakethe zendawo kanye nezikhangiso zabaculi ezenzeka phakathi nentwasahlobo nesikhathi sasehlobo.
Ngokuvamile azikho izindlu ezizungezile, indawo izungezwe ngama-acres amathathu ehlathi lasendulo neliseceleni futhi indawo ezungeze idolobha elikhulu iyinhle kakhulu, ithule futhi ithulile, abantu abahle, iningi labo abaculi abavela kwamanye amazwe abahlonipha indawo ezungezile, abathandi bale ndawo ehlukile nobuhle balesi sigodi esisebenzisayo ukubizwa ngegama elidlule "I-Conca d 'Oro".
Ngaphandle kokukhohlwa ilungelo lokuba ne-Potentino 's Castle edumile njengomakhelwane wethu oseduze, isigodlo esihle sakudala esikude ngemizuzu eyishumi ukusuka endlini yethu.
Ungayifinyelela ngokuhamba ngezinyawo noma ngebhayisikili endleleni yakho emfuleni omuhle i-Vivo D'Orcia lapho sihlala sincoma khona izivakashi zethu ukuba zibe nokugeza okunempumuzo nokuqabula ezindaweni zokubhukuda eziningana zamanzi ezinoshukela ongazithola zonke eceleni komfula. Abanikazi beNqaba basebenzisa ukuhlela izifundo ezithakazelisayo kanye nezingqungquthela ezifana nokupheka, ukuthwetshulwa kwezithombe, ubumba, njll. Baphinde bahlele imishado, banikeze amakhonsathi wamahhala weklasikhi ne-jazz, lapho futhi ungakwazi ukunambitha khona iwayini labo elaziwayo kanye namafutha omnqumo wezintombi owengeziwe.
Sizotholakala futhi sizokujabulela ukusiza uma kudingeka, ukuxazulula noma yikuphi ukungabaza noma umbuzo phakathi nokuhlala kwakho nathi.
Sithanda abantu futhi sabelana ngendlela yangempela imisebenzi yethu yansuku zonke epulazini, ngakho-ke wamukelekile ukubamba iqhaza kubo futhi usijabulele esimweni semvelo nesangempela sasepulazini.
Sithanda abantu futhi sabelana ngend…
ULuisa Ungumbungazi ovelele